ရွှေနိုင်ငံ: ကျားသေကိုအသက်သွင်းတဲ့ ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့ ဘ၀နေ၀င်ချိန်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သမျှသော လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်မှုတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အတူ ပေါ် ပေါက် လာခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်မှုတွေကို ဆန်းစစ် ကြည့်ပါက နိုင်ငံရေးအယူဝါဒကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ လူမျိုးရေးအမြင်အရသော် လည်းကောင်း ပေါ် ပေါက်ခဲ့ရတာဆိုတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမှာ မြန်မာ့ တပ်မတော် နဲ့ ဖုန်ကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုး ကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကတော့ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ လူမျိုးရေးအမြင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘဲ မူး ယစ်ရာဇာ တစ်ယောက် ရဲ့ နယ်မြေလုရာမှ ပေါ် ပေါက်လာခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်ကြား ရှင်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့ ဥပဒေပြု ရေး အာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတွေကို လက်နက်ကိုင်ဆူပူ သောင်းကျန်းမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု များအပါအ၀င် အဓမ်္မ နည်းများဖြင့် ရယူလိုရန် ဆောင်ရွက်လာခြင်းသာဖြစ် ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါး စော်ကားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်အကြောင်း ပြောရရင် ကိုးကန့် လူမျိုးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုးကန့် ဒေသအခြေအနေကိုလည်း နားလည်ထားသင့်ပါ တယ်။
ကိုးကန့်လူမျိုးများဟာမန်ဒရင်းတရုတ်စကား ကို ပြောဆိုတဲ့ဟန်လူမျိုးစုဝင်များဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးကန့်လူမျိုးများဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မန်ချူးလူမျိုးတို့ သြဇာကြီးထွားလာချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို တိမ်းရှောင်ရောက်ရှိလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နမ့် မူချောင်းတစ်ဝိုက်နဲ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းင်းကတစ်ဆင့် ကိုး ကန့်လူမျိုးများဟာ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည် နယ်၊ လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်းဒေသသို့တဖြည်းဖြည်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ကိုးကန့်စော်ဘွားဒေသ အဖြစ် စုစည်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လောက်ကိုင် ဒေသမှာ ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားအများစု နေထိုင် သဖြင့် ကိုးကန့်ဒေသဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သူ့ကျွန်ဘ၀ကျရောက်နေစဉ် ၁၈၉၇ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ၊၄ရက်တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့သောတရုတ်- အင်္ဂလိပ် နယ်နိမိတ်စာချုပ်အရလည်းကောင်း၊ လွတ် လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု သမ်္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ်္မတ နိုင်ငံတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့သော နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး စာချုပ်အရလည်းကောင်း ကိုးကန့်ဒေသဟာ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းတည်ရှိပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ အပြည့်အ၀ သက် ရောက်သော ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထ၀ီ တည်နေရာအရ ကိုးကန့်ဒေသဟာပြည်ထောင်စု သမ်္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်အရှေ့ဘက်ပိုင်း တွင် တည်ရှိသော ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့မြောက် အစွန်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်းထူထပ်ပေါများပြီး မြေပြန့်လွင်ပြင် အနည်းငယ်သာရှိသော ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် မြို့ နယ် ၂ခု၊ မြို့နယ်ခွဲ ၂ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆ခု၊ ကျေး ရွာပေါင်း ၂၇၈ရွာရှိပြီး လူဦးရေ ၂သိန်းခန့်ရှိပါတယ်။ ကိုးကန့်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး ဗမာ၊ ကချင်၊ကရင်၊ ရှမ်း၊ ချင်းနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ ရောနှောနေထိုင်ကြ ပြီး အများစုမှာ နတ်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကာ ဗုဒ်္ဓ ဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ကိုလည်းကိုးကွယ် ကြပါတယ်။ ကိုးကန့်လူမျိုး ၈၆.၇၆ ရာခိုင်နှုန်းနေ ထိုင်သော ဒေသဖြစ်သောကြောင့် ကိုးကန့်ဘာသာ စကားအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ အဓိကစီးပွား ရေးအနေဖြင့် ကြံနဲ့လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ တည်ထောင် ကာ တစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု များလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။ရှေးပဝေသဏီကတည်း က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ကိုးကန့်လူမျိုးများကိုသိန်းနီစော်ဘွားများလက်အောက် ခံ ကိုးကန့်စော်ဘွားဒေသအဖြစ် ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုးကန့်စော်ဘွားများရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ခေါင်း ပေါင်းနီလက်နက်ကိုင်လူငယ်များဖြင့် ကိုးကန့်ကာ ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရတက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာ စော် ဘွားများအာဏာ စွန့်လွှတ်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအဲဒီ ကိစ်္စကို မကျေနပ်တဲ့ ကိုးကန့်စော်ဘွားရဲ့သား ဂျင်မီ ယန်းဟာ ကိုးကန့်ကာကွယ်ရေးတပ်အချို့ကိုခေါင်း ဆောင်ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ ပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့ ကိုးကန့်ကာကွယ်ရေးတပ်များ ကို ဖုန်ကြားရှင်က ဆက်လက်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါ တယ်။
ဖုန်ကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်ကာကွယ်ရေး တပ်တွေဟာ ကူမင်တန်(တရုတ်ဖြူ)၊ ဗကပတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီများရယူ ခြင်းပြုလုပ်ပြီးအင်အားတည်ဆောက်လာတဲ့အတွက် ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကို စစ် ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖုန်ကြားရှင်လည်း တစ် ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှာ ပဲခူးရိုးမမှာ အခြေချလှုပ် ရှားခဲ့တဲ့ ဗကပတို့အနေဖြင့် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ အခြေမလှတော့တဲ့အတွက် အရှေ့မြောက်ဒေသမှာ စစ်ရေးအရ တိုးချဲ့လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ အရှေ့ မြောက်ဒေသကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဗကပရဲ့ စည်းရုံး သိမ်းသွင်းမှုကြောင့် ဖုန်ကြားရှင်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ဟာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ ဗကပအဖွဲ့လက်အောက်သို့ ကူး ပြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗကပတို့ဟာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ မုံးကိုးစခန်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို စတင်ထိပါးခဲ့ပါတယ်။ ဗကပတို့ဟာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ ချီဗွေ၊ လောခေါင်၊ ဆော့လော်၊ ကိုးကန့်နဲ့ “၀”ဒေသများကို ၀င်ရောက် လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီး ကိုးကန့်၊ “၀”နဲ့ ကချင်ဒေသခံတိုင်း ရင်းသားတွေကို ဗကပ အင်အားစုများအဖြစ် ထပ် မံသိမ်းသွင်းပြီး အင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ မြောက်ဒေသကို ဗကပတို့ စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အတွက် သမိုင်းဝင် ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀တိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ ဗကပတပ်ရင်းကြီး ၄၀၄ ကို ဦးဆောင်ပြီး သံလွင် အရှေ့ခြမ်း၊ ကွမ်းလုံဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတွန်းလှန်တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် အကျအဆုံးများစွာနဲ့ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ သွားခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်လွန်ကာလမှာ တရုတ် နိုင်ငံမှာ မူဝါဒများပြောင်းလဲလာပြီး ဗကပအပေါ် အစဉ်အဆက်ထောက်ပံ့မှုတွေ လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံက အကူအညီ လုံးဝဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက် ဗကပတို့အခြေ ယိုင်လာခဲ့တယ်။ ကျဆင်းနေတဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး သိက်္ခာဆယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဗကပတို့အနေနဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ စီစီဝမ်-တာပန်စခန်းသိမ်းတိုက် ပွဲအားဆင်နွှဲလာခဲ့ရာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုးကန့်အပါ အ၀င် ဗကပတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားခဲ့ရပါတယ်။ ဗကပတို့ရဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးကျဆင်းယိမ်းယိုင်နေတဲ့အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ရက် မှာတော့ ကိုးကန့်ဒေသနဲ့ မုံးကုံးရှိ ဗကပမြောက်ပိုင်း ဗျူရိုကို ဖုန်ကြားရှင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ တွေက သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဗကပလက်အောက်မှ ပုန်ကန် ခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခွဲထွက်ခဲ့ရခြင်းဟာ ဗကပအောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းင်းတို့အတွက် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှမရှိခဲ့တဲ့ အတွက် ခွဲထွက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဗကပလက်အောက်မှ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သိရှိနား လည်ခဲ့ကြတာကြောင့် ဥပဒေဘောင်အတွင်း ၀င် ရောက်ဖို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြကမ်းလှမ်းခဲ့ ပါတော့တယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြပြီးနောက် ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ် တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီတပ်မ တော်ဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ရက်မှာ တပ်ဖွဲ့ ၀င်အင်အား ၂၉၀၆ ဦး၊ လက်နက်မျိုးစုံ ၁၃၄၅ လက် တို့နဲ့အတူ နိုင်ငံတော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီး ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ကလည်း ကိုးကန့်အဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်း ၀င် ရောက်လာမှုကို လက်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းင်းတို့အပေါ် မတရား အသင်း ကြေညာထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ကာ ရှမ်း ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကိုးကန့်အထူးဒေသ(၁)အဖြစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အထူးဒေသ(၁) ဖွဲ့ စည်းပြီးမကြာမီ ကိုးကန့်ဒေသခံ ကိုးကန့်အထူးဒေသ (၁) လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမှာ ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ “ဖုန်”အဖွဲ့နဲ့ ရန်မိုးလျှံဦးဆောင်တဲ့ “ရန်”အဖွဲ့ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့အားပြိုင်မှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါ တယ်။
ဖုန်ကြားရှင်ဟာ Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) အမျိုးသားဒီမို ကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခဲ့ပါတယ်။ လောက်ကိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ အကူ အညီနဲ့ အခွင့်အရေးတွေတောင်းခံရယူခဲ့သော် လည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဟန်ပြအဖြစ် သာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေကိုသာအဓိက ထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ဟာလောက် ကိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထက် ၎င်းင်းအာဏာတည် မြဲရေးကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန် ကြားရှင်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ တပ်ရင်းမှူးများအပါ အ၀င် အဆင့်ဆင့်သော ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရားမ၀င်ငွေကြေးရှာဖွေပြီး မူးယစ်သောက်စား ခြင်း၊လောင်းကစားခြင်းတွေပြုလုပ်ကာလက်အောက် ခံတပ်တွေကို စနစ်တကျကြပ်မတ်ကွပ်ကဲဖို့ ပျက် ကွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဖုန်ကြားရှင်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ် စားဝတ်နေရေးတာဝန်ယူမှု မရှိဘဲ မိန်းမကိစ်္စရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကုန် ကူးခြင်းဖြင့်သာ အချိန်ကုန်လျက်ရှိပြီး စည်းပျက် ကမ်းပျက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့နဲ့ ရန်မိုးလျှံ အဖွဲ့တို့ဟာ တစ်စတစ်စအားပြိုင်လာရာမှ “ဖုန်”၊ “ရန်”နှစ်ဖွဲ့ခွဲထွက်သွားခဲ့ရပြီး ဖုန်-ရန်အရေးအခင်းများ လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ အရေးအခင်းများအတွင်း ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုဖြင့် ကိုးကန့် ဒေသတွင် “၀”လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ပတ် သက်ခဲ့ရာ တပ်မတော်အစိုးရက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေး ခဲ့ရပါတယ်။ တပ်မတော်အစိုးရက ကိုးကန့်အဖွဲ့တွေ နယ်မြေလုတိုက်ပွဲများထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ (လောက်ကိုင်နှင့် ချင်းရွေဟော် ဒေသ)၊ ရန်မိုးလျှံအဖွဲ့ (ကုန်းကြမ်းဒေသ)၊ မုံဆာလ အဖွဲ့ (မုံးကိုး၊ သံလွင်အနောက်ခြမ်းဒေသ) စသည် ဖြင့် နယ်မြေများအသီးသီး ခွဲဝေပိုင်းခြားသတ်မှတ် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကန့်ဒေသတွင်း နိုင်ငံတော်ကလောက်ကိုင် နဲ့ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် ၂ခုဖြင့် ခရိုင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ချင်းရွှေဟော်ကို လောက်ကိုင်မြို့နယ်ရဲ့ မြို့နယ်ခွဲ အဖြစ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။သို့သော်လည်း နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အုပ်ချုပ် ရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ထိ ရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိစေဖို့နဲ့ မူးယစ် ဆေးဝါးနဲ့ လက်နက်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေ လွတ် လပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဖုန်ကြားရှင်က ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်သယောင် ဟန်ပြကာ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မြို့၊ရွာတွေကို တင်းကျပ်စွာ စတင်ချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ ကိုးကန့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကြောင်းပြပြီး ကိုးကန့်ဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနဲ့လက်နက် စက်ရုံတွေတည်ဆောက်ပြီး လက်နက်မှောင်ခိုရောင်း ၀ယ်ခြင်းများကို တွင်ကျယ်စွာဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ် ကျိုးရှာအာဏာယစ်မူးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်တွေအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရက အတန်တန်သတိပေးပြီး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာ ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့ ရန်လုံကျိုင်း လက်နက်စက်ရုံကိစ်္စနဲ့ တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုတွေကို အရေးယူနိုင်ရေး နိုင်ငံတော်အစိုးရက ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင် ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်ကြားရှင်က ရန်လုံ ကျိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအပါအ၀င် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ကျော်ကို ၎င်းင်း ရဲ့တပ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ တပ် မတော်က သွားရောက်ကယ်တင်တဲ့အခါ အချုပ်ခန်း ထဲထည့်ထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၄ဦးကို ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေ အတွက် ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ပြစ် မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် ဥပဒေအကြောင်းအရ အမှုဖွင့်ကာ တရားခံပြေးများအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ တပ်မတော်လှုပ်ရှားစစ် ကြောင်းများနဲ့ ဖုန်ကြားရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တိုက်ပွဲ များဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ရက်မှ စ၍ တပ်မတော်က ပြည်သာယာစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ် မြေရှင်းလင်းခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလ ၂ရက်ထိ တိုက်ပွဲ များပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၎င်းင်းကို စစ်ကူပေးခဲ့သော ၀ နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါ တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဖုန် ကြားရှင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးကာ ၎င်းင်းမှတစ်ဆင့် သားမက်ဖြစ်သူ ဦးစိုင်းလင်း ဥက်္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့ ရှိရာ မိုင်းလားသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံသွားခဲ့ပါတယ်။ စိုင်း လင်းရဲ့တင်ပြချက်အရ မိုင်းလားတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံ နေသော ဖုန်ကြားရှင်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် အစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ တော်အစိုးရရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ဖုန် ကြားရှင်ဟာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုးကန့်ဒေသတွင် ပြန်လည်အခြေ ချနိုင်ရေးအတွက် လူ၊ လက်နက်၊ ငွေကြေးစုဆောင်း မှုများ ပြန်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော် ၀ါရီလ ၉ရက်မှာတော့ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အားသာလွန်စွာ အသုံးပြု၍ လောက် ကိုင်ဒေသကို အလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ လက်နက်ကိုင်မဟာမိတ် များဖြစ်တဲ့KIA? TNLA? SSA (၀မ်ဟိုင်း)၊ ၀ အဖွဲ့ များပါဝင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုရဲ့အင်အားကိုရယူကာ ကိုး ကန့်ဒေသတစ်ခုလုံးအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် ၎င်းင်း မှတစ်ဆင့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မုန်းကိုး၊ စောင်း ဆိုင်မှ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားအထိ တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ဖို့ဆိုပြီး အကြံကြီးကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ သော်လည်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက လောက် ကိုင်ဒေသကို အချိန်မီ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ပျက်သွားခဲ့ရပါ တယ်။ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများနဲ့ တပ်ပေါင်းစု များဟာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက် အချက်အချာ ကျတဲ့ တောင်ကုန်းများကို သိမ်းပိုက်အခြေပြု ကာတစ်ဖက်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မျဉ်းအားအကာအကွယ် ယူပြီး မြေနေရာအသာစီးယူကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊စစ်သည်တို့ရဲ့အသက် များစွာပေးဆပ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း တပ်မ တော်သားများဟာ ရင်ကိုမြေကတုတ်လုပ်၍ အမိ မြေကို တစ်လက်မမျှ အဆုံးအရှုံးမခံလိုသော စိတ် ဓာတ်ဖြင့် အသက်စွန့်ကာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင် လျက်ရှိပြီး လေကြောင်းပစ်ကူ၊ အမြောက်ပစ်ကူများ ဖြင့် ဟန်ချက်ညီညီ စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် သောင်းကျန်းသူများထံမှ အချက်အချာတောင်ကုန်း များအား တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအပါအ၀င် ပြည်သူ လူထုတစ်ရပ်လုံးက တပ်မတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံ ရေးနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် မကြုံစဖူးအားပေးထောက် ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာပဲ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်အပေါ် မီးစတစ်ဖက်၊ ရေမှုတ် တစ်ဖက် ဆက်ဆံနေသော ဖုန်ကြားရှင်ကို ကူညီ နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ မိုင်းလားအဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထွက်ပြေးသွား သော ဖုန်ကြားရှင်ခိုလှုံခြင်းရှိ/မရှိ မေးမြန်းခဲ့မှုအပေါ် မရှိကြောင်းဖြေကြားခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖုန်ကြားရှင်အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါရန် တင်ပြမှုဖြင့် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အပေါ်လိမ်လည် မှုပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရသစ်လက် ထက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ စိုင်းလင်းဦးဆောင်တဲ့NDAA အဖွဲ့ဟာ မိုင်းလားဒေသတွင် မူးယစ်ဆေး ၀ါးကိစ်္စများ ကင်းရှင်းပါပြီဟု ကမ်္ဘာသိ အာမခံခဲ့ သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဖုန်ကြားရှင်ခေါင်းထောင်နိုင် လောက်အောင် မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ် ခွင့်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် နိုင်ငံတကာကို လိမ်လည်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အလားတူပဲ “၀”အဖွဲ့ဟာ ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူများနဲ့ ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း ငြင်း ဆိုခဲ့ပေမဲ့ သိမ်းဆည်းရမိအလောင်းများထံက ရရှိ တဲ့ လက်နက်များဟာ ၀ စက်ရုံထုတ်လက်နက် များဖြစ်နေခြင်း၊ တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စစ်သည် တို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရ တိုက်ပွဲတွင် ၀ တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာသိရှိရခြင်း ကြောင့် “၀”အဖွဲ့၏ ရပ်တည်လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ ပြောကြားချက်များဟာ ခိုင်မာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်အပေါ် မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ တပ်မတော်ကလည်း ဖုန် ကြားရှင်နဲ့ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်ပေါင်းစု များအနေဖြင့် ၎င်းင်းတို့လုပ်ရပ်များအပေါ် တာဝန်ယူရ မှာဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် တပ်မတော်ကပြုလုပ်တဲ့ ကိုးကန့်သောင်း ကျန်းသူအဖွဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ လောက်ကိုင်ဒေသ သို့ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်စဉ်အား ရှင်းလင်းပွဲတွင် တရားဝင်အသိပေးပြီး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကန့်အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများဟာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီး စစ်ရေးအရ အချက်အချာကျ တဲ့နေရာနဲ့ တောင်ကုန်းများမှာတပ်စွဲပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချောမွေ့စေရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ အသက်၊ သွေး၊ချွေး မြောက်မြားစွာပေးဆပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ သောင်းကျန်းသူများတပ်စွဲရာ တောင်ကုန်းတွေဟာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းနဲ့ နီးကပ်လွန်းတာကြောင့် တပ်မ တော်လေယာဉ်မှ ပစ်လိုက်တဲ့ ဗုံးစများဟာ လွှင့် ပျံခဲ့ပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံသား ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်နည်း လမ်းအရ တောင်းပန်ပြီး လျော်ကြေးငွေပေးဖို့ ကမ်း လှမ်းထားပြီးဖြစ်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လက် ရှိအခြေအနေတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများအား တပ်မတော်မှ လေကြောင်းပစ်ကူ၊ အမြောက်ပစ်ကူ များနဲ့ ဟန်ချက်ညီ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိ ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၈ရက်မှာတော့ အမြင့် ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်မားပြီး သောင်းကျန်းသူတို့ ခြေ ကုပ်ယူထားသော ပွိုင့် ၁၈၄၅ တောင်ကုန်းကို တပ်မ တော်က ရွပ်ရွပ်ချွံချွံထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ သောင်းကျန်းသူအခိုင်အမာအခြေပြုစခန်း ၂၀ကျော် တို့ကို တပ်မတော်က သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းတောင်ကုန်းကို သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပတ် ၀န်းကျင်အား စိုးမိုးလျက်ရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်းများ၊ တောင်ကုန်းများနဲ့ သောင်းကျန်းသူ များ ခိုအောင်းနိုင်သောနေရာများကို ထိန်းချုပ်ထား နိုင်ခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများသို့ တပ်မတော်က ဆက်လက်အောင်မြေချဲ့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ မကြာခင်ကာလမှာပဲ ကိုးကန့်အကြမ်း ဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် ချုပ်ငြိမ်းပြီး လောက်ကိုင်ဒေသဟာ တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှုများ အပြည့်အ၀ပြန်လည်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါ တယ်။
ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာ ယနေ့အချိန်အထိ ၂လတာ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ လေကြောင်းပစ်ကူ၊ အမြောက်ပစ်ကူများပေးကာ ခြေလျင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဟန် ချက်ညီညီတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ ဟာ လူ၊ လက်နက်အမြောက်အမြားဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ် ပါတယ်။ ယခုအခါ တပ်မတော်တိုက်ယာဉ်များရဲ့ ပစ်ကူကိုပါ ထပ်ပေါင်းပြီး ပစ်ကူပစ်အား ထိရောက် စွာ ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့များ အထိ နာခဲ့ရသလို စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုး ကန့်သောင်းကျန်းသူများဟာ တပ်မတော်ရဲ့ တရစပ် ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် လက်နက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုမရှိ စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့်တစ်မျိုး၊ စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြားများ တိုက်ကျွေး၍တစ်ဖုံ ပြန်လည်စည်းရုံး နေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်ကြားရှင်အနေနဲ့ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ အထောက်အပံ့ကို အလွန်အကျွံမျှော်လင့် နေပြီး တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ကို လျှော့တွက်မိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ် လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပါ အ၀င် ကမ်္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ခန့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပြီး သမိုင်းအစဉ် အလာအရ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်း နှီးစွာ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့နည်းတူ တပ်မတော်အချင်း ချင်းလည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံ၍ အချုပ် အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အပြန်အလှန်လေး စားမှုဖြင့် ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေ မှာလည်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမှာ တည်တံ့ခိုင် မြဲလျက်ရှိပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ဖုန်ကြားရှင်အနေနဲ့ တစ်ဖက် နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကို ရယူရန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါ ဘူး။
ဒါ့အပြင် တပ်မတော်အနေနဲ့ ဖုန်ကြားရှင် ဘက်က အားပေးကူညီထောက်ခံနေတဲ့ တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကို ပြင်းထန်စွာ သတိပေးပြီးဖြစ်လို့ ဖုန်ကြားရှင်ကို အစဉ်အမြဲအကာ အကွယ်ပေးနေတဲ့ သမက်ဖြစ်သူ မိုင်းလားဥက်္ကဋ္ဌ စိုင်း လင်းက လက်ခံဖို့စဉ်းစားနေရသလို “၀”လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း လက်ရှောင်တော့မယ့် အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးကန့်ဒေသတစ်ဝိုက် မှာလည်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် ဖုန်ကြား ရှင်ရဲ့ ဘိန်းနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအမြောက်အမြားဆုံးရှုံး ခဲ့ရပြီး စီးပွားရေးထိခိုက်ရသလို ယခုလိုအခြေအနေ မျိုးမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရန်လည်း မရတော့တဲ့အခြေ အနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လောက်ကိုင်ဒေသ တွင် အမိနိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားစွာနဲ့ တရား သောစစ် ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ တပ်မတော်သားများ ဟာလည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့အတူ ဖုန်ကြားရှင်ဦးစီးသော သောင်းကျန်းသူများအား အရိုးကြေကြေ အရေခန်း ခန်း အစွမ်းကုန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျားသေကို အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားလာ တဲ့ ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ နောက်လိုက်များရဲ့ နေ၀င်ချိန် တွေများလားလို့ တွေးမိကြောင်းပါ။